musha nyika dzakabatana Singers Ruka Anobatanidza Nyaya dzeUcheche Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Luke Combs Biography inokuudza Chokwadi pamusoro peNyaya yeUdiki Nyaya yake, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki, Musikana / Wife kuva, Mararamiro, Net Kukosha uye Hupenyu Hwega.
Muchidimbu, iyi ndiyo nhoroondo yeAmerican muimbi-munyori wenziyo. Isu tinotanga kubva pamazuva ake ekutanga, kusvika paakatanga kuve nemukurumbira. Kuti ndikupe kuravira kweanobata chimiro chaLuka Combs 'Bio, heino pikicha yekufananidzira yehupenyu hwake.
Iyo Hupenyu Nyaya yaRuka Combs.
Ehe, iwe neni tinoziva iye mumwe we Akanakira Nyika Nyowani Artists muUnited States. Zvisinei, vashoma chete ndivo vakaverenga nhoroondo yaLuka Combs, zvinova zvinonakidza. Zvino, pasina imwezve ado, titange.
Ruka Combs Yehucheche Nhau:
Kutanga kuenda, mazita ake akazara ndiLuka Albert Combs. Iye achisimuka muimbi-munyori wenziyo weAmerica akazvarwa pazuva rechipiri raKurume 2 kuna Amai vake, Rhonda Combs, uye baba, Chester Combs.
Luke akaberekerwa muAsheville, North Carolina, United States. Zvino heino maratidziro aaiita panguva yehudiki hwake makore ayo aive teddy bere akatasva.
Little Luke mune yake teddy bere akatasva makore.
Iko Ruka Combs Vabereki kunobva- Mhuri Yemavambo uye Nhoroondo:
Muimbi wenyika uye munyori wenziyo anorumbidza anobva kumhuri yeAmerican kubva kurudzi rwakachena. Zvikuru, Ruka ane zvimwe zveScotland uye zveGerman mhuri yekutenda kune mumwe wevabereki vake.
Panyaya yemhuri yake, vabereki vaComb vaive vasina kupfuma panguva yehudiki hwake. Baba vake vaive mushandi wekuchengetedza hupenyu hwavo hwese vachiri amai vake, pamwe muchengeti wemba. Pamwe chete vabereki vaviri (vanoratidzwa pazasi) vakatarisira mhuri nemari shoma.
Tosangana naLuka Combs Mubereki, Rhonda, uye Chester Combs. Mufananidzo: Facebook
Ruka Anobatanidza Hupenyu hwepakutanga- Zvanga zvakaita sei:
Kutanga uye pamberi pezvese, nyeredzi yenyika yakakura semwana anofara muguta reAsheville, North Carolina. Iri iguta (ona mepu pazasi) inozivikanwa nzvimbo ine hunyanzvi hwekuita uye nhoroondo yezvivakwa.
Ruka akapedza makore ake achiri mudiki achitamba nhabvu neshamwari munharaunda yake. Nhabvu uye kwete kuimba yaive mutambo waakasarudza achiri mwana.
Iri ndiro guta reAsheville, uko Luke Combs anokura pamwe nevabereki vake.
Kupedza hudiki hwake muguta remimhanzi, ramangwana tarenda rakadzidza kuda uye kuridza nziyo. Kuziva tarenda remwanakomana wavo, vabereki vaLuka Combs vakavimbisa kuti vakamutengera zvinodikanwa zvemumhanzi zvishandiso, izvo zvakamugonesa kushanda seyechidiki muimbi.
Luke Combs ' Dzidzo - Primary uye High Chikoro:
Kufanana nemubereki wese akazvitsaurira, Rhonda naChester vakasimbisa mwana wavo anowana dzidzo yepamusoro. Pakati pamakore matanhatu, Luke akange atotanga chikoro chake chepuraimari chiri muAsheville, US.
Beyonce Knowles Utano Hwokupedzisira Plus Untold Biography Facts
Luke Combs akafananidzirwa zuva rekutanga kukireshi aine makore mashanu ekuberekwa.
Mushure memakore matanhatu enguva dzose epuraimari, vabereki vaLuke Combs vakaenderera mberi nekumunyoresa ku AC Reynolds High School. Ichi zvakare chikoro cheveruzhinji chikoro chiri muAsheville, North Carolina.
Sezvanga zvichitarisirwa, muimbi mudiki akasungira tarenda rake remimhanzi achiri paReynolds High Chikoro. Kuchikoro, Luke akaimba nemapoka akasiyana emimhanzi. Panguva ino, akatanga kudzidza kudzidzira pachikuva, feat isingagumira pakuridza solos mune inozivikanwa Carnegie Hall.
Luke Combs akadzidziswawo pachikoro chepamusoro che AC Reynolds.
Kufanana nemudzidzi wese anopenya, Ruka akakwanisa kuita zviitiko zvakawanda zvekunakidzwa uye dzidzo.
Luke Anobatanidza Mazuva Emayunivhesiti
Mushure mefundo yake yechipiri, Luke akawana mvumo yekudzidza Criminal Justice paAppalachian State University iri muBoone, North Carolina. Kwete nekuda kwemimhanzi, aive asiri zvishoma pamudzidzi akatarisana apo aive kuUni.
Yakanakisa University akapa Combs mukana wekudzidza. Asi pachinzvimbo chekuzvipira kuzvidzidzo, aisarudza kushandisa yakawanda yenguva yake kutamba Gitare.
Ruka akaenda kune imwe yeYakanakisa State University muUS.
Tichiri kuState University, Luke akarovera Luke Bryan's 2011 hit "Luke Bryan - Ini Handidi Kuti Husiku Huno Hugume.”Akaita izvozvo chaizvo achivarairwa nevateveri vake vashoma vevadzidzi, uye izvi zvakaita kuti vakurumidze kuona ramangwana rake.
Mushure mekurumbidza kwakawanda, wechidiki mimhanzi nyeredzi akakurudzirwa paakatanga kugadzira konzati dzinoverengeka, izvo zvakaita kuti ave munhu anozivikanwa pamusasa. Yakanga iri panguva ino Ruka akaziva kuti aizozvikudza mumimhanzi.
Luke Anobatanidza Makore Ekutanga ebasa
Kuva nechivimbo kuti aizozviita mumimhanzi uye aisazoodza moyo vabereki vake, Luke akafunga kusiya chikoro. Iyi sarudzo yakauya isingasviki gore rekutenderedza dzidzo yake. Combs akazviitira kuti aite basa remimhanzi.
Apedza chikoro, akafunga kuenda kuNashville, imba yeAmerican Country Music. PaNashville, Ruka akaramba achiona nezvekushingaira mukutamba mimhanzi yenyika uye kuvaraidza vanhu, kunyanya kuParthenon Cafe.
Heano Luke Combs aine show yake yekutanga kuParthenon cafe.
Pakutanga pabasa rake, mimhanzi yanga isina kukwana kuti iye Combs ararame. Waizviziva here?… Luke Combs akamboshanda sebouncer asati apihwa nguva yekuenda, achiri mubhawa.
Semunhu akapenga, Ruka akatora chero mukana waakawana, zvese muzita rekuita mari zhinji kuti zviroto zvake zvirarame. Kunyangwe pakati pekuita zvakawanda, mudiki akaburitsa EP yake yekutanga "Iyo Maitiro Anotasva”Muna 2014.
Ruka Anobatanidza Biography- Nzira yekuenda Mukurumbira Nyaya
Kuchinja kwebasa raRuka kwakauya paakaburitsa yake yekutanga kurova single Hurricane, iyo yakatengesa 15,000 makopi muvhiki yayo yekutanga. Haina kungomira ipapo, yakatanga panhamba 46 paBillboard's Hot Country Songs chati.
Wanga uchizivawo here?… Dutu rakasvika panhamba yekutanga pachirongwa chenhepfenyuro chenhepfenyuro yenyika, chakabata nzvimbo iyoyo kwemavhiki maviri. Kubudirira uku zvakare kwakaisa nzira yekuita chibvumirano naRandy Goodman, uyo akasaina Combs mune yake Sony Music Nashville mumhanzi label.
Heano Randy naCombs onstage panguva yeMusic Biz 2019 Awards paJW Marriott Nashville.
Kubvumirana kusaina iyo Sony Music Nashville mimhanzi label yaive sarudzo yakanaka sezvo yakaratidza shanduko mukutendeuka kwaLuka Comb's nhoroondo.
Ruka Anobatanidza Biography- Simuka kune Mukurumbira Nyaya
Muimbi wenyika akawana mukana wakakura webasa muna Chivabvu 2018, nekuda kweballad "Akanaka Anopenga. ” Rwiyo urwu (ona pazasi) rwakava smash pawairesi ichisvika nhamba yekutanga pane Country Airplay chati.
Waizviziva?… Kubudirira kwaRuka Kunopenga ndiko kwakange kuri chikonzero chikuru chekuti agamuchire Kusarudzwa kweGrammy yeGreat Artist muna 2019.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora Luke Combs 'Biography, muimbi akaita nhoroondo pamataiti eBillboard yenyika. Zvinyorwa zvine izvo kuti ndiye mutambi wekutanga (kubvira Johnny Cash muna 1959) kuve nenziyo shanu panguva imwe chete muHot Country Songs chati yeTop 25.
Sekureva kwaGrizzlyRose, Luke Combs anotungamira Kwete: 1 yeiyo Gumi Gumi Kukwira Nyika Artist muUS. Kurarama kwekumaodzanyemba.
Kuratidzira kwaRuka No1 mumufananidzo uri pamusoro apa kunopfupisa kumuka kwake mukurumbira biography nyaya. Panguva yekunyora, iyo nyika nyeredzi mitengo nhamba 1 pane iyo Wepamusoro Gumi Kukwira Nyika Artist muUS. Vamwe vese, sekutaura kwedu, inhoroondo.
Luke Anobatanidza Hukama Hupenyu- Musikana, Singe, Wakaroora Nevana?
Muchikamu chino, isu 'tinobvisa mweya pahukama hwehukama hwaLuka Combs. Kubva zvave kubudirira, vateveri vazhinji venyika vafungisisa, vachibvunza kana Luke Combs aine musikana kana kuti akaroora, zvichireva- kune mudzimai.
Panguva yekunyora Luke Combs 'biography, nyeredzi yenyika iri kudanana zvine hukama naNicole Hocking, muAmerican uye chizvarwa cheFort Myers, Florida.
Akazvarwa muna Chikunguru 22, 1992, Nicole ndiFlorida Gulf Coast University Alumna, kwaakawana degree reBachelor. Asati apedza kudzidza muna 2014, aishanda kubhawa remuno kuti awane imwe mari.
Sangana nemusikana waRuka Combs, Nicole Hocking.
Vose Luke naNicole Hocking vakatanga kufambidzana kutanga kwa 2016, iri nguva yaaive achiri kuwana nzvimbo yake muindasitiri yemimhanzi. Nyeredzi yenyika inoroora musikana wake munaNovember 2018.
Kugadziriswa kwaakaitwa naRuka Musikana musikana (Nicole Hocking)
Nicole ave achibatsira mukubudirira kwaRuka mumakore apfuura. Waizviziva here?… Nicole ndemumwe wevaya vakabatsira kubatsira Luke kuwana nzvimbo yake mumhanzi wenyika. Iyo yepamusoro musikana yakamuzivisa iye kune vamwe vakabudirira mumhanzi nyeredzi inotungamirwa nekwavo kubasa (BMI). Ivo vese vanobudirira kubudirira nekubatana pamwechete.
Musikana waRuka Nicole Hocking akaita zvakawanda kumuchinja.
Luke akambobvuma kuti pane shanduko dzakakosha muhupenyu hwake kubva zvaakasangana nemusikana wake. Peharbs, haumbozive, aive Nicole akabatsira Ruka kusiya tsika yake yekunyudza (yekudya yefodya).
Kusvika pakuziva Ruka Kunobatanidza Vabereki NeVemhuri Mhuri:
Luke Combs akafananidzirwa nevabereki vake vanodada nevazhinji (mai vake, Rhonda, uye baba, Chester).
Kubudirira-kumashure-kumashure kubudirira kwaRuka kubvira pahudiki hwake mazuva aisazogoneka pasina mhuri. Muchikamu chino, tinokanda rumwe ruzivo munhengo dzemhuri dzaLuke Combs, kutanga nevabereki vake vanodada.
Nezve Baba vaRuka Combs, Chester:
Luke nababa vake- vese vachinyemwerera kubudirira kwemhuri yavo.
Vanodada baba vakazvarwa vari pakati pemakumi matanhatu. Chester akachengeta mhuri yake achienda nekushingaira mukutengeserana kwake. Somugadziri wegadzirisheni, anoshandira mukukwirisa zvigadzirwa kuti uite zviri nani kuvimbika uye kuwanikwa.
Kubva pakutanga, Chester aigara achivimba nehunhu hwemwanakomana wake uye matarenda. Akange asiri iye baba vaizoenderera nekuramba mwanakomana wavo nekusiya chikoro. Parizvino, baba vaRuka vanonakidzwa nekudada kwese kwekuve neUS yakanakisa muimbi anobudirira semwanakomana wavo.
Nezve amai vaRuka Combs:
Luke Combs akafananidzirwa achimira naamai vake vakuru, Rhonda.
Rhonda Combs, amai vaRuka, vakazvarwa pakati pemakore makumi mashanu. Iye ndiye mhando yaamai vanosarudza kurarama hupenyu hwakavanzika uye hwakanyarara. Ronda anongowanikwa chete pamadziro aRuka panguva yemhemberero dzezuva raAmai.
Ndivanaani vaRuka Combs 'Hama nehama?
Ruka mizinga inofananidzirwa pamwe nehama yake, Clayton. Ivo vaviri vanotaridzika kupora pamwe chete.
Chokutanga uye chakakosha, Luke Combs ane hama yaamai Clayton, waanoda kwazvo. Zvakare, vake ndasekuru vakararama kuti vaone kubudirira kwemuzukuru wavo. Sekuru vaamai vaRuka Combs ndiJames Andrew Frasure, asi ambuya vake amai vaamai ndiMargaret Ann Hasty.
Ruka Anobatanidza Hupenyu hweMunhu
Kutanga kuenda, iye mumwe nemumwe ane ushamwari uye anoda kuva pakati pevanhu vakasiyana kwazvo. Luke munhu asina hanya, anogara achida kubatsira vamwe asingatarisiri kuwana chero chinhu kudzoka. Iye anoratidzira hunhu hwePisces zodiac.
Munguva yake yekuzorora, Luke anoda kutarisa basketball, uye zvirokwazvo, timu yake yaanofarira basketball ndiyo Miami Heat. Pazasi payo pikicha yaRuka naNicole vakabata yakagadziriswa Miami Heat jersey mushure mekuona mutambo.
Ruka nemusikana wake, Nicole, mushure mekuona iyo Miami Heat mutambo.
Zvizhinji paCombs Hupenyu hwega
Tine mufananidzo chiratidzo chekuti nyika mimhanzi nyeredzi inofarira kubata hove. Muimbi anofarirwa anoda kutora nzendo dzekuenda kuOzark, Missouri, kwaanobata hove huru kwazvo.
KunaRuka, rwendo kuenda kuOzark, Missouri, ndiyo yakanakisa kana iwe uchida kubata hove huru.
Dai Ruka aive asiri mumimhanzi yenyika, pamwe angadai akazove muredzi wehove. pfungwa?
Luke Anobatanidza Mararamiro
Kutanga, ngatitaurei nezve yake mambure kukosha. Sekureva kwa WealthyPersons, Luke Combs anofungidzirwa kuve nemambure akakosha emadhora matanhatu mamirioni. Kwakatangira hupfumi hwemuimbi kunobva mukutengesa maAlbum, nekutengesa kwakanyanya kungangoita anopfuura 6, 670 marekodhi.
Nyeredzi yenyika, iyo yakakura muhukuru zvechokwadi inoda mota hombe. Ruka anozivikanwa kututumidzira yake Super Duty F-250 King Ranch Truck, mutengo wayo uri kutenderera madhora zviuru makumi manomwe.
Heano muimbi wenyika anoonekwa aine Super Duty F-250 King Ranch Rori.
Nemubhadharo we zviuru mazana mapfumbamwe emadhora, anokwanisa kutenga marudzi ese emotokari kwaari uye yega yega yemhuri yake.
Luke Anobatanidza Untold Chokwadi
Tisati taputira nyaya yedu yehudiki uye biography yemuimbi wemimhanzi wenyika, ngatitaurirei zvimwe zvezvisingataurike chokwadi chake.
Chokwadi # 1 - Iye Akasarudzika Maitiro Ekunyora Rwiyo
Maitiro ekunyora kwaRuka anotanga nemusoro wenyaya kunyangwe asingazive kuti zvirimo. Izvi ndizvo zvaakataura paakabvunzurudzwa nezve tarenda iri. Mumashoko ake: "Kana ndiine zano, ndinoedza kuzvinyora pasi sezita remusoro, uye ndozozvitora kune yangu co-kunyora ndoti, 'Hei murume, iwe unofungei nezve izvi' Pasina nguva , mumhanzi munoberekwa. ”
Chokwadi # 2 - "Akanaka Kupenga" asati asangana neMusikana wake, Nicole
Luke paakanyora rwiyo rwake "Akanaka Anopenga," akange asati achidanana nemusikana wake. Iwo vaviri padanho rekushandisa nguva yakawanda pamwe chete. Panguva iyoyo, shamwari idzo dzakazotendeuka vadi dzaisatombove padyo nekufambidzana.
Chokwadi # 3 - Iyo X Crocs shangu
Luke Combs ane bhutsu dzake idzo dzakagadzirwa nekambani inozivikanwa yekugadzira shangu, Crocs.
Luke Combs akabatana neCrocs Shoe.
Sekureva kweNyika Rabel, iyo show ndiyo yakasununguka pane imwe nyika uye inotengesa nekukurumidza zvikuru nekutenda kune iyo inyanzvi yeartist. Luke akamboonekwa akapfeka shangu dzemakoko ake akaturikidzana neshamwari yake, Post Malone.
Tinotenda nekuverenga nyaya yedu paLuka Combs uye kutenda mairi Zvatiri uye Zvatinoita. Vatariri vedu pa ChildhoodBiography akatarisa kunze kwekururama uye kururamisira paanenge achisimudza Luke Combs 'Biography uye Yehucheche Nyaya.
Nomutsa isa zvaunofunga kana taura nesu kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka pachinyorwa chino nezve Combs. Kuti uwane ruzivo runokurumidza uye rwakajeka, heino pfupiso petafura yenyika nyeredzi mumhanzi.
Zita rizere Luke Albert Combs
Bhavhdhe 2nd zuva raKurume 1990
vabereki Chester Combs (Baba) naRhonda Combs (Amai)
mudiwa Nicole Hocking (pamwe achazouya mudzimai)
dzidzo AC Reynolds Chikoro uye Appalachian State University
Net Worth $ Miriyoni 6
urefu 5 ft 8 in
uremu 90 makirogiramu